Hlola i-Toulouse, eFrance - World Tourism Portal
Hlola i-Toulouse, eFrance
Yini okufanele uyenze eToulouse, eFrance.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeToulouse
Bukela ividiyo ekhuluma ngeToulouse
Hlola iToulouse idolobha eningizimu-ntshonalanga France, eduze kwasePyrenees, esifundeni saseMidi-Pyrenees, phakathi kwesiqhingi phakathi kwe-Atlantic neMedithera. IToulouse iyidolobha lesine ngobukhulu eFrance, ngemuva Paris, eMarseilles futhi Lyon futhi yaziwa njengedolobha lombhoxo nama-violets.
I-Toulouse isiphenduke isikhungo sezindiza nokukhanya kwe-space eminyakeni edlule ye-20. Ngaphezu kwe-35,000 yezakhamuzi zangaphakathi zedolobha i-400,000 zisebenza ezindizeni zomphakathi noma ezimbonini zasemkhathini; I-Airbus Group (eyake yaziwa njenge-EADS) umqashi omkhulu kakhulu esifundeni. Idolobha lihlale lingaguquki naphezu kokuthuthuka komnotho.
Idolobha lelo, eMfuleni iGaronne, lisendaweni eyakhiwe indawo yaseRoma yasendulo; ngisho nanamuhla imigwaqo emincane ilandela abalingani babo abangamaRoma futhi izakhiwo eziningi ezibomvu zezitayela zesitayela se-pseudo-Roman. Lezi zakhiwo futhi zinikeza iToulouse isidlaliso sayo iLa ville rose (Idolobha eliphinki).
Eminyakeni ephakathi nendawo, iToulouse yayingenye yamadolobha acebile eFrance ngenxa yokuthengiswa kombala oluhlaza okwesibhakabhaka (i-pastel) ekhishwe ezitshalweni zoboya. Lokhu kuqothuka kwaqhekeka kuphela lapho amaPutukezi eqala ukungenisa i-Indigo eYurophu. Amahhotela angaphezu kwe-50, izindawo zokuhlala, ahlala engofakazi kwingcebo edlule.
I-Toulouse inesikhungo esincane, futhi ungafinyelela izindawo ezithakazelisa kakhulu endaweni yedolobha ngokunethezeka ngezinyawo.
I-Basilique Saint Sernin- isonto elivela kwi-11th Century, ngokwengxenye ebuyiselwe umakhi wezakhiwo odumile waseFrance uViollet-le-Duc.
IHôtel d'Assézat- enye yezindawo ezikhangayo kakhulu ezindlini eziningi zakudala zedolobha. Ihlala neqoqo lobuciko beBemberg Foundation.
I-Capitole- ihholo ledolobha elishukumisayo nelibukeka njengemidlalo yeshashalazi, i-facade yayo enhle ebheke kwi-Grand Place du Capitole
IPont-Neuf- naphezu kwegama layo (njengebhuloho laseParisian legama elifanayo, isihloko salo kungenzeka ukuthi lisuselwa eFrance elithi 'New', hhayi elithi 'Nine'.), Okuwukuphela kwebhuloho elidala eliwela umfula iGaronne; yakhelwe phakathi kwe-1544 ne-1626
I-Le Couvent des Jacobins, beka ama-j jobobins. Isonto lesonto nesonto kwakhiwa ngekhulu le-13th ukuze kulwe nokuqanjwa “kwasendaweni” yendawo ecaleni kwenkolo eyayiholwa yizicukuthwane zaseFrance ezenzeka ngasikhathi sinye. Ingxenye yesonto iyathakazelisa kakhulu njengoba imidwebo yayo emihle nejwayelekile isilondoloziwe, futhi iqukethe iziqephu zikaThomas Aquinas. Uzobona "umthi wesundu" ongashintshiwe futhi ophakeme kakhulu osekela uphahla, ubufakazi bokuthi kwakukhona izindlela zakudala zaseYurophu zokwenziwa kwamasu wokwakha. Eduzane nekhabethe elincane ngakwesobunxele sesonto, ungathola umnyango owenziwe ngokhuni ocashile ozokuholela endaweni yokugcina impahla yesonto. Yenziwe ngezitini ezibomvu nemabula, kuyindawo enhle yokuthula nobuhle, ngenhlanhla enhle yokuba muhle phakathi nehlobo. Le indawo enhle ongahamba kuyo uma ufuna ukufunda incwadi, noma nje uphumule kude nomsebenzi wesikhungo sasedolobheni.
Ipaki yasedolobheni iGrand Rond, kancane eningizimu-empumalanga enkabeni yedolobha
U-Les AugustinsUfakwe isonto lezindela, futhi namuhla usumnyuziyamu wezobuciko. Kukhona iqoqo elithandekayo lobuciko kanye ne-cloister ekhangayo lapho kukhona khona idizili noma izikebhe eziningi uma ukubona sekudlulele ngokweqile.
Imyuziyamu yeLes AbattoirsModern Arts, futhi kunengadi enhle enokubukwa okuhle eGaronne
Ubuciko beGeorges Labit MuseumAsian futhi EGibhithe iminyuziyamu yasendulo engadini eyingqayizivele neyaseMedithera eyakhelwe ku-1893.
I-Canal du Midi. ICanal du Midi noma iCanal des Deux Mers ingumsele omude we-240 km eningizimu France, le Midi. Umsele uxhuma uMfula iGaronne ne-Étang de Thau eseMedithera. ICanal du Midi iyiSayithi Lamagugu Omhlaba leUNESCO. Ungahamba noma ujikeleze emabhange alo kodwa edolobheni kukhona nemigwaqo emikhulu nhlangothi zombili. Izinto ziba nokuzola eningizimu yePort St-Sauveur (lapho iningi lezikebhe zomsele lihamba).
I-Peniche Baladine Boat Tours, (Izikebhe zisuka eDaurade, eduze naseCapitole). Thatha uhambo lwesikebhe ezansi noMfula iGaronne futhi / noma udlule emiseleni eholela oLwandle iMedithera nolwandle i-Atlantic Ocean. Ukuhamba ngomzuzu nge-70.
Hambela idolobha kanye nomgwaqo iCanal du Midi noma umfula iGaronne usuka ebhulohweni iSt Pierre nePont-neuf kusihlwa. Njengoba kungekho mabhomu awela enkabeni yedolobha phakathi nempi, ifa lokwakha likhulu ngokumangazayo futhi lilondolozwe kahle, ngakho-ke ukuhambahamba kungaba yinto enhle kakhulu yedolobha elivamile laseYurophu kubavakashi bakwamanye amazwe.
I-Partyat St Pierre Place: idume kakhulu phakathi kwabafundi bakaToulouse
Bona Umdlalo WeRugby. Uma unenhlanhla eyenele yokuba seToulouse ngosuku lomdlalo, landela izixuku kanye nenjabulo enkundleni bese ukhuphula umkhathi.
I-Oc'tobus, ikunikeza umqondo omusha, ukuxuba ukunambitha, imisebenzi, ukuqondisa, ukuthutha kanye nokufakwa esizeni esikhulu.
I-Toulouse Alternative Arts Scene
I-Toulouse ingelinye lamadolobha aseFrance akhetheke kakhulu - mhlawumbe ngenxa yesibalo esikhulu sabafundi kanye nomlando waso owedlule, kanye nesakhamuzi saseSpain republican / communist / anarchist, amasosha kanye nabalwi abaphunyuke Spain ngokusebenzisa ama-Pyrenees ngesikhathi se-'Risirada 'e1939 ngemuva kweMpi Yezwe YaseSpain. Ngakho-ke noma ngabe idolobha lizama ukuqeda ngabo, lisanikeza inani elikhulu lama-squats, amanye awo aphethe ukunyakaza kwezobuciko. I-MixArt Myrysis ingenye yeqembu labadwebi elidala nelisebenzayo labadwebi edolobheni.
I-La Dynamois iklabhu elitholakala eklabhini yangaphambili yezocansi nendawo enhle yokubona amabhendi abukhoma neminye imisebenzi yokwenziwa - ça bouge! Akhiwe edolobheni.
U-Les Motivéesis inhlangano esebenzisana kakhulu nezepolitiki nezenhlalo eToulouse, futhi ehlela noma ebamba iqhaza emicimbini eminingi yamahhala, iziteleka, amakhonsathi, njll. Unyaka wonke. Basungula iqembu lezepolitiki eminyakeni embalwa edlule elisebenza kahle endaweni yakini futhi libambe izikhundla ezimbalwa noMkhandlu waseCity Hall. Bheka futhi iTactikollectif inhlangano yabo ebambisene nabo emicimbini efana nemikhosi, njll. Okunomsuka wayo endaweni engasenyakatho yeToulouse, okuyiyona enezindlu zokuhlala umphakathi kanye nezinga eliphansi lempilo.
ILa Grainerieis ibekelwe kakhulu isekethe futhi yaqala ukwenziwa futhi yahlalwa emhlabeni onqabile onsundu; iphatha ukuhlanganiswa okuhlukahlukene kwabaculi minyaka yonke.
IL'Usineis enye indawo yokuhlala yabaculi nokuhlangana, etholakala eduzane (iTransnefeuille, i-12kms kusuka enkabeni yedolobha laseToulouse]
le Collectif d'Urgence Acteurs Culturels - I-Emergency Collector for Cultural Actorsdefend the world Associative and ahlukile amasiko, kanti iToulouse Réseau Unitaire Citoyen - I-Civil Unitarian Network yeToulouse ihlose ukuvusa izimpikiswano zasendaweni, zenhlalo nezepolitiki.
I-Albi, - Idolobha elikhulu kunawo wonke emnyangweni weTarn ne-Cathedral yalo ebhalwe njenge-UNESCO World Heritage Site.
UCarcassonne - Idolobha leli lidume ngeCité de Carcassonne, inqaba yangezikhathi eziphakathi ebuyiswe ngumbonisi wezakhiwo nomakhi wezakhiwo u-Eugène Viollet-le-Duc e1853 futhi wanezela ohlwini lwe-UNESCO lweZindawo Zamagugu Womhlaba.
I-Ariège, - I-Ariege indawo yokuphumula yemisebenzi yezintaba yangaphandle, ihora le-1.5 kude nePyrenees.